Vivaldi 4.2 inobvumidza iwe kushandura sarudzo uye kubvunza iCloud makarenda | Linux Vakapindwa muropa
Vivaldi 4.2 ikozvino inokutendera iwe kududzira sarudzo uye kubvunza iCloud makarenda
Ivo vanga vachitoiyedza kwemavhiki uye yatove pano mushanduro yakagadzikana. Nhasi, aimbova CEO weOpera akazivisa kuvhurwa kwe Vivaldi 4.2, uye pasina kuve yakakosha yekuvandudza seiya yakaunza tsamba, karenda uye RSS feed, yauya nenhau dzinobatsira. Chimwe chazvo ibasa ratakataura kuti vari kuyedza kwenguva yakareba, uye ndezvekuti kubva zvino tichakwanisa kududzira zvinyorwa tisingasiye peji ratiri kushanyira.
La yapfuura vhezheni yaive v4.1, uye pairi pakabuda nzira nyowani yekukochekera tabo dzavaireva se "akodhiyoni." Ino nguva, uye senguva dzose, pane runyorwa rurefu rwekuchinja, hwakawanda zvekuti havangakwanise muchinyorwa chakadai, asi vanoratidzawo izvozvo ikozvino QR kodhi ivo vari nani pazvinhu zvakaita sezvavanogona ikozvino kugadzirwa kubva mubhokisi rinoonekwa kana iwe uchidhinda (Fn) F2.
Vivaldi 4.2 inosimbisa
Kubvira kwekududzira zvinyorwa pawebhu peji pasina kurisiya, uye zvese zvakavanzika.
Kugadziridzwa kwemakodhi eQR, pakati pezviri izvo zvinogona kugadzirwa nemirairo inokurumidza. Izvo zvinogadzirwawo nekukurumidza.
Padivi repaneru rava kutsvedza.
Injini nyowani yekutsvaga inowanikwa: Neeva. Injini ndeyayo uye yakavanzika, uye haishambadzi nekuti inotsigirwa nekunyoresa.
ICloud Calendar iri kushanda zvakare.
Injini yakavandudzwa kuChromium 93.0.4577.83.
Iyo yepaneru pani inogona kuonekwa kunyangwe yakazara skrini.
Zadza rondedzero yeshanduko kune iyo kusunungura chinyorwa naVivaldi 4.2.
Vivaldi 4.2 ikozvino iripo kune ese masisitimu akatsigirwa kubvira website yepamutemo. Kune vashandisi veLinux, avo vane repository yakawedzerwa, chimwe chinhu chinoitwa otomatiki kana uchiisa iyo browser kekutanga pane anoshanda masystem senge iwo akavakirwa paDebian (apt), iyo yekuvandudza yatove yakamirira mune software nzvimbo. Mapakeji nyowani anosvika kune kumwe kugovera mumaawa mashoma kana mazuva anotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Vivaldi 4.2 ikozvino inokutendera iwe kududzira sarudzo uye kubvunza iCloud makarenda
Parizvino, shanduro dzainoita hadzina kunaka, dzimwe nguva dzinoshandura kunyangwe chikamu chepeji uye zvakare hachibvumidze iwe kusarudza kududzira kana iyo interface iri mumutauro mumwechete nehurongwa. Neraki, ikozvino ini ndinoshandisa yakawanda firefox 92, iyo kunyangwe isina muturikiri wechivanhu (kana, haigone kuitwa kuti ishande nemazvo) ini ndawana yekuwedzera (kana kuwedzera-pane) izvo izvozvi zvinoshanda zvinoshamisa uye zvirinani pane izvo iyo chrome, Edge inounza kana chero imwe. Kuwedzeredzwa kuri pane peji re mozilla addons kunodaidzwa KUTI DUDZIRA WEB PAGES (muChirungu inonzi translate mapeji ewebhu) akagadzirwa nemushandisi Filipe Ps. Kunyangwe ichishandisa iyo google kana Yandex injini yekushandurudza (ini ndinoda google's nekuti inoshandura zvirinani) chinhu chakanaka nezve izvi ndechekuti inoshandura zvakazara peji, ndiko kuti, kana paine mitauro yakawanda mariri (semuenzaniso: foramu kubva vivaldi ine papeji rimwe chete zvinyorwa muChirungu, Chinese, Russian, Portuguese, nezvimwewo), kana iwe ukaisa kududzira, inoshandura mitauro yese kuenda muchiSpanish (izvo zvandisati ndaona zvimwe zviwedzero zvichiitwa, ivo vanongoshandura mutauro mumwe chete) , inoshandurawo Disqus makomendi (ayo akawanda ekuwedzera andakaedza asingashandure) uye nguva yekushandura iri kukurumidza chaizvo kana ichienzaniswa, semuenzaniso, iyo iyo vivaldi inayo. Ndokusaka ini ndichikurudzira kuwedzera uku kune avo vanoshandisa firefox
Kali Linux 2021.3 inosvitsa zvimwe zvinhu zvitsva, asi hapana chinokwezva kutariswa seNetHunter yewachi
RetroArch inowana kuvhurwa pane iyo Steam mutengi